KUNTWELA ezansi kogcine ekhalela kwezolimo ngoba engawutholi umsebenzi awufundele. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uPhathutshedzo Madula, umsunguli weMarvel Chilli yaseThohoyandou, eLimpopo
UNONYAKA kuphela eqale ibhizinisini lezolimo elikhiqiza amaveji nopelepele. Kodwa usaziwa iNingizimu Afrika yonke ngomsebenzi wakhe omuhle.
UMnu uPhathutshedzo Madula, waseLimpopo, usaziwa izwe lonke ngomsebenzi wakhe omuhle futhi ukholwa wukuthi ibhizinisi lakhe elisha iMarvel Chilli Sauce liya kude kakhulu.
I-Marvel Chilli Sauce uyikhiqiza esebenzisa amaveji awavuna ensimini yakhe ngaphansi kwenkampani yakhe yezolimo. Uthi uziqhenya kakhulu ngokukwazi ukuqala umkhiqizo wakhe esebenzisa ulwazi abezihlupha ngalo ngenkathi lapho ebehleli khona engasebenzi ngenxa yendlala yamathuba omsebenzi.
“Ngokwemfundo ngiwunjiniyela kagesi kodwa kube wumqansa kimi ukuthola ukuqeqeshelwa umsebenzi. Iminyaka emine yonke ngingasebenzi, ngaleso sikhathi ugogo wami wayevame ukutshala ensimini yakhe esekhaya uma kuyizikhathi zemvula, ngaleyo ndlela ngakwazi ukufunda kuyena okuningi ngezolimo.
“Ngibe senginquma ukuya kwamanye amapulazi asendaweni ngiyofunda ngezolimo. Ngiqale ngithengisa utamatisi, u-pepper neklabishi,” kulanda yena.
Ujamu waseMarvel Chilli Sauce
Uqhube wathi ngenxa yokuswela ulwazi uke waba nenkinga yokuswela amakhasimende. Nokho ngokubekezela nokuqhubeka ezihlupha ngolwazi lwalo mkhakha ugcine ekwazile ukusimamisa ibhizinisi lakhe.
Uthi usebenzise izinkundla zokuxhumana ukukhangisa ngebhizinisi lakhe, athi kumsize kakhulu ukumdobela amakhasimende.
“Ngifunde ukubekezela, ngafunda nokuthi empilweni azisizi izindlela ezinqamulelayo, kunalokho kumele sidlule ebunzimeni ukuze sikwazi ukufika esicongweni,” kusho uMadula, oqale nge-atchaar yamaveji eMarvel Chilli Sauce.
Akagcini ngokukhiqiza i-sauce kapelepele ne-atchaar yamaveji kuphela kodwa uphinde enze ujamu wezithelo, okatamatisi neminye imikhiqizo eyomiswa elangeni. Uthe ukwenza loku kwaba yisinqumo esilula ngenxa yobukhulu besikhala emakethe.
“Inkampani yethu iyakwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ngisho kunendlala yamakhasimende. Uma ngingenza isibonelo nje, uma umlimi othile ekhiqiza utamatisi omunye wawo wonakala, mina ngiyawuthenga unjalo kuyena ngoba ngikholwa wukuthi awukho umkhiqizo ofanelwe ukulahlwa,” kusho yena.
Uthi imikhiqizo yakhe uyithengisa eLimpopo, eminye ayithumele izwe lonke. Unxuse abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bathenge imikhiqizo ekhiqizwa ngosomabhizinisi basezweni.
“Abantu banemicabango ephusile futhi uma sikholelwa kubona sibone nemikhiqizo yabo emashalofini, singosomabhizinisi abamnyama singakwazi ukufinyelela lapho esifisa ukufinyelela khona. Kunabantu abenza ijusi, izinto zokugcoba nemikhiqizo yokuhlanza kodwa asikholelwa kubona nasemikhiqizweni yabo,” kuzikhalela uMadula.